जमैका मा के गर्ने | यात्रा समाचार
जमैका मा गर्न को लागी चीजहरु
मारिएला क्यारिल | | जमाइका, के हेर्ने
जमैका बब मार्लेको भूमि भन्दा निकै धेरै छ, त्यसैले तपाइँको आगन्तुकहरुलाई केहि प्रस्ताव गर्नुहोस् अविश्वसनीय परिदृश्य र केहि प्राकृतिक गन्तव्यहरू भेट्न र बाहिरका गतिविधिहरू गर्न जुन अपूर्व छ।
जमैका ग्रेटर एन्टिलिसमा तेस्रो ठूलो टापु हो र यो क्युबाको तटबाट १ 145 किलोमिटर टाढा अवस्थित छ। आज योसँग धेरै नै ठूलो होटल प्रस्ताव छ र त्यहाँ धेरै पर्यटन एजेन्सीहरू छन् जुन यसको भूगोल भर भ्रमण र भ्रमणहरू मिलाउँछन्, त्यसैले हामी तपाईंलाई एउटा छोड्छौं। तपाइँ जमैकामा के गर्न सक्नुहुन्छ भन्ने सूची घर फर्कन को लागी निश्चित छ कि तपाईं यस सुन्दर टापु थाहा छ।
2 जमैका मा गर्न को लागी चीजहरु
टापु यो अरावाक्स र टैनोसले पहिलो पटक बसोबास गरेको थियो, स्पानियार्डको आगमन सम्म मूल मानिसहरुलाई मिटायो, अधिकतर पुरानो महाद्वीपबाट ल्याएका बिरामीको कारणले। उपनिवेशवादीहरूले अफ्रिकी दासहरू ल्याए जसले ग्रेट ब्रिटेनको हातमा परेका थिए जब यो देशले यो टापु कब्जा गर्‍यो, जसको नामले यसलाई आजको नामले चिनिन्छ: जमैका।
औपनिवेशिक समयमा अंग्रेजी झण्डा मुनि यो एक चिनी उत्पादक भयो त्यसैले दास जहाजहरु को आउने र जाने स्थिर थियो। उन्नाइसौं शताब्दीको मध्यमा दासहरू स्वतन्त्र भएपछि बेलायतीहरूले भारतीय र चिनियाँ कामदारहरू ल्याए र यो १ 60 s० को दशकको डेकोलोनेसन प्रक्रिया नभएसम्म जमैका स्वतन्त्र भएसम्म रह्यो।
आज यो करीव three० लाख मानिस बसोबास गर्दछs र संयुक्त राज्य अमेरिका र क्यानडा पछि, यो अमेरिकामा अंग्रेजी बोल्नेहरूको स number्ख्याको संख्या भएको देश हो।
ठीक छ, हिंड्नुहोस्! यो टापु यो सक्रिय पर्यटकहरु को लागी महान छ त्यसोभए त्यहाँ नबस्नको लागि सबै कुरा छ। हामी टापुलाई तीनवटा गन्तव्यमा विभाजन गर्न सक्छौं: ओचो रियोस, नेग्रिल र मोन्टेगो खाडी, सबैभन्दा लोकप्रिय गन्तव्य किंग्स्टन, राजधानी गणना छैन।
En आठ नदीहरू सबै भन्दा राम्रो कुरा यात्रा गर्नु हो डन्न्स नदी र फल्स पार्क। भ्रमणमा केही घण्टा खर्च झरना चढाई र समुद्री तटमा आराम गर्नु समावेश गर्दछ जुन तपाईंको खुट्टामा बनेको हुन्छ। चढाई फिसलन हुन सक्छ तर यो खतरनाक छैन किनकि यो डुब्न लिन पछि तातो छ र यो आवश्यक छ, र यदि तपाईंले ग्रोप्रो ल्याउनुहुन्छ भने म तपाईंलाई लिने लाग्ने शानदार छविहरूको बारेमा पनि भन्दिन।
पार्क प्रत्येक दिन बिहान :8::30० देखि pm बजेसम्म खुला रहन्छ, तर क्रूज जहाजहरू आइपुगेको दिनमा यो एक घण्टा पहिले खुल्छ। प्रवेश वयस्क प्रति $ २० हो र 12 प्रति बच्चा। तपाईं प्रवेशद्वारमा टिकट किन्नुहुन्छ र तपाईंसँग मार्गनिर्देशित भ्रमणमा सामेल हुने विकल्प छ जुन तपाईंलाई झरनाहरूको शीर्षमा लैजान्छ। तपाईं भाँडामा लिन वा पानीको जुत्ता पनि किन्न सक्नुहुन्छ।
अर्को विकल्प छ डल्फिन कोभमा डल्फिनको साथ पौडिनुहोस्एक वर्षा वनको बीचमा दुई हेक्टेयर साइट। तपाईं स्टिंग्रेज बीच पौडी खेल्न सक्नुहुन्छ, गिलासको तल्लो कय्याक्समा सवारी गर्न सक्नुहुन्छ वा क्यारिबियन यात्रा गर्न सक्नुहुन्छ, शार्क देख्न सक्नुहुन्छ, र ज through्गलमा हिंड्न सक्नुहुन्छ।
तपाईं पनि सक्नुहुन्छ चन्दवामा जानुहोस्, राफ्टिंगमा जानुहोस् वा ब्वेनो नदीको बगिरहेको पानीमा हाम फाल्नुहोस्, गर्नुहोस् समुद्री किनारमा घोडा सवार, सियोन बसमा चढ्नुहोस् र टापुको यस अंशको इतिहास र संस्कृति केहि जान्नुहोस्, ग्रीन क्रोटीो गुफाहरू हेर्नुहोस्, एक सुन्दर प्राकृतिक आश्चर्य वा पुरानो बगैंचा मध्ये कुनै एक भित्र जानुहोस् जुन त्यहाँ गतिविधिहरू र पैदल छन्।
मोन्टेगोबे यो जमैकाको दोस्रो ठूलो र सबै भन्दा महत्वपूर्ण शहर हो। यो एक सुन्दर तटीय शहर हो जुन अक्सर क्रूज जहाजहरू द्वारा आउँदछ। यो हल्ला, भीड र रंगीन स्थान हो। तपाईं सक्नुहुन्छ साम शार्प स्क्वायरमा बजार, पसल र बारहरू भ्रमण गर्नुहोस्यो सहरको मुटु हो जहाँ पहिले दासहरूको जेल थियो जुन भाग्न हिम्मत गर्थ्यो।
यहाँ तपाईं सक्नुहुन्छ हेरिटेज ट्रेल्स मार्ग अनुसरण गर्नुहोस् र यो देशको ईतिहास पत्ता लगाउनुहोस्। यदि तपाईं सनबेथ गर्न चाहानुहुन्छ भने त्यहाँ विश्व प्रसिद्ध समुद्र तट हो चिकित्सक गुफा बीच, धेरै स्वस्थ खनिज पानी संग। अर्को नजिकैको समुद्री किनारा कर्र्नवाल हो र त्यहाँ केही थप समुद्र तटहरू तर केन्द्रबाट अलि टाढा छन्। क्यारिबियनमा सब भन्दा राम्रो ज्ञात हवेली रोज हल हो त्यसैले यो भ्रमण गर्न छोड्नुहोस् किनभने यो विश्वास छ कि प्रेतवाधित छ.
यो एनी पाल्मर नाम गरेकी एउटी महिलाको स्वामित्वमा थियो गुलाब हलको सेतो चुपचापजसले तीन जना लोग्नेको हत्या गर्‍यो र आफ्ना दासहरूमा भूत थियो। यो पूर्ण रूपमा पूर्वावस्थामा ल्याइएको छ, फर्निचर र सबै कुराको साथ, र तपाईं यसको बगैंचाको भित्र र बाहिर यसको भ्रमण गर्न सक्नुहुनेछ। तपाईं पनि कोठोकोमा नयाँ ताजा बियर लिन सक्नुहुन्छ किनभने पबले त्यहाँ काम गर्दछ।
अर्को पुरानो चिनी वृक्षारोपण हो हवेली Belvedere, मोन्टेगो खाडी बाहिर मात्र। यो यस्तो कार्य गर्न जारी रहन्छ र यसको मालिकहरूले यसलाई निर्देशित भ्रमणमा सार्वजनिक खोलेका छन्। यो सुन्दर छ र यसको बगैंचामा नदी र झरनाहरू छन्। बेलेफिल्ड अर्को औपनिवेशिक हवेली हो यसले एक सय वर्ष पुरानो चिनी मिल बचाउँछ, जुन गधा, यसको पार्क र बगैचा द्वारा संचालित थियो र पक्कै, समय मा फिर्ता यात्रा गर्न पुनर्स्थापित हवेली। त्यहाँ अन्य औपनिवेशिक म्यानहरू छन् तर यदि तपाइँ प्रकृति मन पराउनुहुन्छ भने त्यहाँ सधैं हुन्छन् catamaran ट्रिप्स, राफ्टि or वा कायाकिंग नजिकैका नदीहरू द्वारा।
र यदि तपाइँ जमैकाको इतिहास थाहा पाएर घर जान चाहानुहुन्छ भने तपाइँ बाँच्न सक्नुहुन्छ Outameni अनुभव। आउटमेनी अनुभव हो एक अन्तर्क्रियात्मक कार्यक्रम संगीत, कला, नाटक र चलचित्रहरूको साथ 90 मिनेटहरू जुन तपाईंलाई यसमा जान दिन्छ जमैकन ईतिहास। यो ट्रेलानीमा छ, मोन्टेगो बेबाट २० मिनेटको दूरीमा।
Finlimtne छ नेग्रिलयस टापुको अर्को छेउमा राजधानी किंग्स्टनको सम्मानमा मोन्टेगो खाडीमा सडकमा जोडिएको छ।
प्रकृति प्रेमीहरूको लागि यहाँ धेरै छ: त्यहाँ छन् YS झरना, the कालो नदीमा सफारीहरू, निलो प्वाल, डाइभि and र स्नोर्कलिंग भ्रमण, सूर्यास्त यात्रा, चट्टानो रिकको क्याफे बाहिर जम्पिंग, ला चमकदार लगून, सबैभन्दा सुन्दर सात मिल समुद्र तट (एक nudism क्षेत्र संग), वा राफ्टिf जानुहोस्।
अन्तमा, ईतिहास बुफको लागि त्यहाँ छ फोर्ट चार्ल्स फोर्ट रॉयल मा, गिडि हाउस र पुरानो नेग्रील लाइटहाउस। प्रतीक्षा गर्नुहोस्, के तपाई बब मार्लेको बारेमा सोच्दै हुनुहुन्छ? कहाँ छ?
ठिक छ, यदि तपाईं कंगस्टनमा विमान वा क्रूज जहाजबाट बाहिर निस्कनुभयो भने यो राजधानीमा छ जहाँ तपाईं भेट्टाउनुहुनेछ बब मार्लेको संग्रहालय। यो मार्लीको घरमा काम गर्छ जुन १ 1975 1981 देखि १ XNUMX XNUMX१ सम्म उनको मृत्युको वर्ष हो।
छ वर्ष पछि यो संग्रहालय बन्यो: आज people० व्यक्तिको क्षमता भएको एक थियेटर छ, एक तस्बिर पुस्तिका र उपहार र स्मारिका पसल। त्यहाँ एक क्याफेटेरिया पनि छ र के प्रदर्शित हुन्छ यो संगीतकारको व्यक्तिगत सम्पत्ति हो। प्रवेश वयस्क प्रति $ २० हो र निर्देशित भ्रमण यो एक घण्टा र एक चौथाई हुन्छ, अधिक वा कम। संग्रहालय सोमबारदेखि शनिबार बिहान :9: from० सम्म खुल्छ।
त्यसैले जमैकाको भ्रमणमा केन्सग्टन, केहि मोन्टेगो खाडी, केही नेग्रिल र केहि ओचो रियो समावेश हुनुपर्छ। दुई हप्ता म भन्छु पर्याप्त छ।
लेखको पूर्ण मार्ग: यात्रा समाचार » अमेरिका » जमाइका » जमैका मा गर्न को लागी चीजहरु
म्युनिकमा Oktoberfest मा जानुहोस्